राजनीति गर्दागर्दै माओवादीमा लागे। अहिले मन्त्री वनेका छन। विहे नभएकोले काठमाडौमा एक्लै छन। केही दिन मात्रै भएपनि मन्त्री काकालाई साथदिन घरवाट आएकी सरिनाको उनीसंग भेटै हुँदैन। भेट नभएपछि के कुरा गर्नु? हजुर आमाले पठाएको अनर्सा कुहिन वेला भै सक्यो। तेरो काकालाई मिठो लाग्छ लै जा भनेर भारी वोकाएकी थिइन। त्यो त्यत्तिकै थन्किएको छ कोठामा।
सरिना दिक्क भएकी छ। काका सरिनाका लागि वेल वनेका छन भने सरिना काकाका लागि कौवा। कौवालाई वेल पाके पनि के, नपाके पनि के? काका पाकेका छन। सरिनाका लागि त्यो पाकेको वेलको फल टोक्नु न वोक्नु। सरिना काकाको मन्त्री घरमा थुनिएकी छ। भात पकाउँछे, खान आउँदैनन्। मन्त्री भएका छन्। जहाँ जान्छन् त्यही रमाउँछन्। सरिनाले भर्खर थाह पाएकी छ मन्त्री काका कसैसंग पल्केका छन्। उनको सेक्युरिटीले पनि त्यति भेउ पाएको छैन। साँझ छिप्पिएपछि उनी महाराजगन्जको कुनै घरमा पस्छन्। मोवाइल सेक्युरिटीको जिम्मा लगाएर कहिले दुइ र कहिले तीन घण्टा हराउँछन्।
यो कुरो अस्वाभाविक लाग्दैन सरिनालाई। मन्त्री काका सरिनाभन्दा तीन वर्ष कान्छा छन। सरिनाको विहे हु"दा उनी अठारका थिए। उनको विहेगर्ने ठीक्क वेला भएको छ। अहिले नगरेको विहे कहिले गर्नु? सरिनाको लोग्ने वेपत्ता जस्तै भएको तीन वर्ष हुन लाग्यो। विहे गरेको छ महिना नवित्दै कामगर्न कतार गएको विवेक फर्किएको छैन। कहिलेकहीं फेसवुकमा भेटिन्छ। कहिलेकहीं पैसा पनि पठाइ दिन्छ। त्यतिले के हुन्छ र? कतारको यही ठाउँमा छ भन्ने थाह मात्रै भएपनि उ जान्थी। सुनेकी छ कुनै धनी आइमाईको सहायक भएर वसेको छ रे। सहायक मात्रै भएको हो कि लोग्ने नै भएको हो? सरिनाले केही वुझन सकेकी छैन।
काका मन्त्री भएपछि श्रमलाई गुहारेर लोग्ने खोज्न कतार जाने मनसुवा राखेर काठमाडौं आएकी हो सरिना। विवेक राम्ररी वसेको रहेछ भने दुइचार वर्ष उतै विताउने पनि सोचेकी छ सरिनाले। श्रमको सहयोग न भै उसको यो काम हुन सक्दैन। उ एकपटक आफैं श्रमलाई गुहार्न आएकी पनि थिइ। त्यसवेला उ सामान्य केटी थिई। उसको च्यानल फिट थिएन। काम नहुनु थियो। भएन र उ फर्केकी थिइ। अहिले आफनै काका मन्त्री भएका वेला सवै च्यानल फिट होला भनेको आफनै काकासंग च्यानल फिट हुन सकेको छैन। यसो गर्दागर्दै सरकारको म्याद सकिएला भन्ने उसलाई ठूलो डर छ। अचेलको सरकारको कुनै भरोसा छैन। कुन दिन म्याद सकिने हो कसैले केही भन्न सक्दैन।
सरिना सोच्दै थिए मन्त्री काका घर भित्रिए दिउँसै। उनी सुस्ताएका थिए र उक्ताएका थिए। कुनैपनि नेताले उनलाई अमेरिका जाने कोटामा नपारेकोले खिन्न थिए। सरिनाले अनर्साको पोको खोली र प्लेटमा राखेर टक्य्राई। अनर्सा देखेर उनको मूड फ्रेस भयो। मौका छोपेर सरिनाले आफनो कथा-व्यथा सुनाइ। अमेरिका जान नपाएको दर्द त मनमा छँदै थियो, भतिजीको मर्मले उनको मन पगाल्यो। त्यसपछि मन्त्रालयको सचिव गुहारे मन्त्री काकाले। गुन लगाउन आतुर सचिवजीले उनको व्यक्तिगत भ्रमणको चाँजोपाँजो सवै मिलाइ दिए। साँझ भीआइपी कक्षहुँदै काका-भतिजी गल्फ एयरको विमान चढन जान लाग्दा पत्रकारहरु आइ पुगी सकेका थिए। मन्त्री काका श्रमिकको दुरावस्थाको अध्ययनगर्न जान लागेको सन्देशदिंदै कतारतिर घुईंकिए। विवेक कतारमा फेलापर्ने हो कि नपर्ने हो? सरिनाका मनमा तरंगहरु उठदै थिए।